NEW FACE | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
NEW FACE | Botataung
Hair Saloon / Eye Beauty
New Face Hair and Make Up ကို၂၀၁၄ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၄၉လမ်းနှင့် လမ်း၅၀ကြား၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့ နယ်တွင်တည်ရှိပါတယ်။ ဆိုင်တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ဆံပင်နှင့်ပတ်သတ်သောဝန်ဆောင်မှုများ၊ Facial Spa၊ မိတ်ကပ်၊ Eyebrow and Eyeliner Beauty စသည်တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောနေရာထိုင်ခင်းရှိပြီး၊ ကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်းများမှဝန်ဆောင်မှုပေးသောကြောင့် Customer များကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Hair Saloon | Eye Beauty
No 119, Between 49 & 50, Anawrahta Road, Botahtaung Township, Yangon.
အနီးအနား 50 လမ်း မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
New Face Hair and Make Up was opened in 2014 and is located at between 49 streets & 50 streets, Anawyahtar Road, Botahtaung Township. It offers variety of service for head to toe such hair and related services, Facial Spa, Make up, Eyebrow and Eyeliner Beauty. It is one of the customers’ favourite place since it has clean and cozy accommodation and excellent service offered by professional stylish.
Geneva Make Up & Hair Style
Feeling Foot Reflexology